जकरिया7ERV-NE - परमप्रभु दया र - Bible Gateway
परमप्रभु दया र करूणा चाहनु हुन्छ
7 फरसमा दाराको राज्यकालको चौथो बर्ष जकरियालाई परमप्रभुबाट एउटा वचन प्राप्त भयो। यो नवौं महिनाको चौथो दिन (किसलेबको महिना) थियो।2बेतेलका मानिसले शरेशेर, रेगेम-मेलेक अनि आफ्नो मानिसहरू समेतलाई परमप्रभुसँग एउटा प्रश्न सोध्न पठाए।3तिनीहरू सर्वशक्तिमान परमप्रभुको मन्दिरका अगमवक्ताहरू अनि पूजहारी कहाँ गए। उनीहरूले प्रश्न सोधे, “हामीले कति बर्ष सम्म मन्दिर ध्वंश भएकोमा शोक मनाउँने। अहिले गरिरहे झैं मैले प्रत्येक बर्षको पाँचौं महिनामा रूनु अनि उपवास बस्नु पर्छ?”
4 सर्वशक्तिमान परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो,5“पूजाहारी अनि देशका सबै मानिसहरूलाई भन, ‘उपवास र विलाप तिमीहरूले सत्तरी बर्ष देखी बर्षको पाँचौं अनि सातौं महिनामा गर्दै आईरहेका छौ, के त्यो उपवास साँच्चै नै मेरो निम्ति हो? होइन!6जब तिमीले खायौ अनि दाखरस पियौ के त्यो मेरो निम्ति हो? होइन! यो तिमीहरूको भलाईका निम्ति हो।’7यी वचनहरू परमप्रभुले अगमवक्ताहरूद्वारा घोषणागर्नु भएको थियो? अँहँ, होइन। उहाँले त्यो वचन त्यति बेला भन्नु भएको थियो जति बेला यरूशलेम मानिसहरूले भरिएको र पुरै उन्नति भएको शहर थियो। परमेशवरले यो कुरा त्यस बेला भन्नुभयो जब यरूशलेमको चारैतिरका शहर अनि नेगेव तथा पश्चिमी पहाडको तराईका मानिसहरू शान्ति पूर्वक बस्थे।”
9 “सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यो कुरा भन्नुभयो,
‘तिमीहरूलाई जे सत्य र उचित लाग्छ त्यही गर्नु पर्छ।
तिमीहरू एक अर्काप्रति दयालु
र करूणामय हुनु पर्छ।
10 बिधुवाहरू, टुहुरा-टुहुरी बिदेशी
अथवा गरीव मानिसहरूलाई चोट पुर्याउनु हुँदैन।
एक-अर्कालाई नराम्रो गर्ने बिचार पनि मनमा ल्याउनु हुँदैन।’”
11 तर ती मानिसहरूले सुन्न अस्वीकार गरे
जे उहाँले गर्न चाहनु हुन्थ्यो।
तिनीहरूले आफ्ना कान बन्द गरे
जसले गर्दा परमेश्रले भनेका कुरा सुनेनन्।
12 तिनीहरू हट्ठी थिए।
तिनीहरूले परमेशवरको व्यावस्था पालन गर्न अस्वीकार गरे।
आफ्नो आत्माशक्तिद्वारा सर्वशक्तिमान परमप्रभुले
अगमवक्ताका माध्यमबाट आफ्ना मानिसहरूलाई वचन पठाउँनुभयो।
तर मानिसहरूले त्यो सुनेनन्,
यसकारण सर्वशक्तिमान परमप्रभु साह्रै क्रोधित हुनुभयो।
13 यसकारण सर्वशक्तिमान परमप्रभुले भन्नुभयो,
“मैले तिनीहरूलाई बोलाएँ,
तर तिनीहरूले उत्तर दिएनन्,
यसकारण अब मलाई तिनीहरूले बोलाए पनि
म तिनीहरूलाई उत्तर दिनेछैन।
14 म अब तिनीहरूलाई एउटा आँधी-बेहरीले झैं
तिनीहरूले नचिनेको अन्य देशहरूमा छरपष्ट गरिदिनेछु।
जब तिनीहरू यो देश भएर जान्छन्
तिनीहरूले छोडे को भूमि उजाड हुनेछ।
त्यो सुन्दर भूमि नष्ट हुनेछ।”